Shirkii Kismaayo oo sedex maalmood istaagay kadib markii
Topnews:-Shirkii Kismaayo oo sedex maalmood istaagay kadib markii
09 April 2013 Waagacusub.com-Shirkii aan lagala tashan dawladda Soomaaliya ee ka socday magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inuu istaagay labo maalin kahor, kadib markii ay shirka soo fariisteen dad lagu qiyaasayo ilaa 1200 qofood, dadkaan oo dhamaan ka kala yimid dalka Kenya, Yurub, Maraykanka iyo Maamul Goboleedka Puntland, Dadkaan ka kooban 1200 oo qofood ayaa la sheegayaa inay kasoo jeedaan Beelaha Ogaadeen iyo Majeerteen. Ergooyinkii yaraa ee ka socday Beelaha Mareexaan, Sheekhaal, Gaaljecel, Jareerweyne, Biimaal, Digil iyo Mirifle iyo Cawramaleh ayaa isaga baxay shirka, kadib markii ay xaruntii shirku ka socday isku bedeshay xarun qofkii ka socda beelaha Ogaadeen iyo Majeerteen uu noqonayo ergada Shirka.
Odoyaasha Beelaha ka baxay shirka ayaa sheegay inay waqti hore bilaabeen cabashooyinka ku saabsan xadidida ergooyinka, balse maalmihii lasoo dhaafay uu shirku isku bedelay masrax uun laga rabo in lasoo buuxiyo, dadkuna Calanka Soomaaliya soo wada qaataan, wax kasta uu guddiga shirka maamulaya uu soo jeediyo lagu dhawaaqo waan qaadanay.
Ergooyinka Beelaha ka baxay shirka ayaa sheegay in dastuurka shirka lagu ansixiyey uusan jirin qof aqriyey iyo dood laga yeeshay dastuurkaas, dastuurka dhan uu yahay dastuurka Puntland oo laga bedelay magaca iyo gobolada kaliya, laguna bedelay Datuurka Jubaland.
Waxaa sidoo kale la sheegayaa in Beesha Ogaadeen dhexdeeda uu khilaaf xoogan ka taagan yahay, maadaama la sheegayo in garabyada beesha Ogaadeen ay ku tartamayaan dadka shirka lagu so daabulayo, iyada oo la sheegayo in Axmed madoobaha Kaanbooniyiinta uu shaki ka galay ergooyinka faraha badan oo ay keensadeen Xildhibaan Gaandi iyo Sheekha haatan Siyaasadda galay ee Shukuul.
Kismaayo waxaa ku sugan ciidamo beeleedyo aan isku dan ahayn, iyada oo ay dhici karto in xili walbaahi xabad bilaabato.
Xildhibaanadii shirka tegay iyo Raysul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar cabdirashiid ayaa gebigood si degdeg ah shalay ilaa manta uga soo baxeen Kismaayo kadib markiixubnihii yaraa ee beelihii shirka Kismaayo ka qeyb galay ay isaga baxeen Shirka, ciidan aruursi xaga beelaha ah iyo maliishiyaad dhac u geysanaya ganacsatada magaalada ay soo kordheen.
Xaalada hadda Kismaayo ayaa ah mid foolanaysa, shirkiina waa istaagay. Amnigii magaaladana uu faraha kasii baxayo.
Sidoo kale waxaa Kismaayo tegay ergeyga midowga Afrika u qaabilsan dalka Soomaaliya Danjire Saalax Nadiif iyo taliyaha ciidamada AMISOM Jen Andrew Gutti, Danjiraha Midawga Afrika iyo Taliyaha AMISOM ayaa booqday Dekedda Kismaayo iyaga oo amray in Ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM ay joojiyaan dhoofinta dhuxusha ka socota Dekedda Kismaayo, amarkaas oo Ciidamada AMISOM ee ku sugan Kismaayo ay isla markiiba dhaqan geliyeen.
W axaa jira warar sheegaya in danjiraha midawga Afrika iyo Taliyaha AMISOM inay amreen ciidanka Kenya inay Joojiyaan shirkii ka socday Jaamacada Kismaayo, maadaama dawladda Soomaaliya ay qoraal rasmi ah u gudbisay Danjiraha Midawga Afrika iyo Taliyaha AMISOM ee Soomaaliya, una sheegtay in Dawladda Soomaaliya shirkaasi aysan waxba kala socon ayna tahay in si degdeg ah loo joojiyo, maadaama ciidanka Midawga Afrika hoostaga ee AMISOM ay dalka u joogaan in Alshabaab ka sifeeyaan Dalka Soomaaliya , dawladda Soomaaliyana ay gacan ka siiyaan dhinaca amniga iyo dib usoo celinta dawladnimada Soomaaliya. Halkaan ka Daawo Warbixino xaqiiqa noqday.